”ဒီအတိုင်းဆို နောင်အနှစ် ၂ဝ-၃ဝ လောက်မှာ သန္တာကျောက် တန်းတွေရဲ့အခြေအနေဟာ ပိုမိုဆိုးရွားလာဖွယ်ရာသာရှိပါတယ်” ဟု ဘွဲ့လွန်ပါရဂူတန်းတက်နေသူ သုတေသီဂျူရီက ထုတ်ဖော်ပြော ဆိုလိုက်သည်။ ”ဒီအခြေအနေဆိုး ကို ကြိုတင်ကာကွယ်ကုသဖို့ လိုအပ် နေပါတယ်” ဟုလည်း ဆက်လက် ပြောကြားလိုက်သည်။ ”ဒါပေမဲ့ အချိန် ကာလတစ်ခုကိုတော့ စောင့်ရဖို့လို အပ်ပါတယ်” ဟုလည်းပြောသည်။ သန္တာကျောက်တန်းများ သည် သမုဒ္ဒရာကြမ်းပြင်၌ တစ် ရာခိုင်နှုန်းဖုံးလွှမ်းနေသော သက် ရှိများဖြစ်ကြသည်။
”ဒီပင်လယ်အော်က သန္တာ ကျောက်တန်းဖြစ်စဉ်တွေ လေ့လာ ရင်းကနေ အနာဂတ်ကုစားနိုင် ရေးနည်းလမ်းတွေတွေ့ရှိခဲ့ရပါ တယ်”ဟု သုတေသီဂျူရီက ထုတ် ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
အစိုးရ လူမှုဖူလုံရေး အာမခံထားသူ လုပ်သား ၁ ဒသမ ၃ သန်းကျော်အထိ တိုးလာသော်လည်း အကျိုးခံစားခွင်??
မျိုးဆက်သစ် လူငယ်ဘောလုံးသမားများ ပေါ်ထွက်ရေးအတွက် နန်းမား၌ ကျပ်သိန်း ၅၄ဝ အကုန်အကျခံ၍ ဘောလံ?
ချင်းသုံးပါတီ ပူးပေါင်း၊ ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အမည်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်မည်